Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta boqolaal Shacab ah Salaadda Ciidul Fidriga kula tukaday Muqdisho – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta boqolaal Shacab ah Salaadda Ciidul Fidriga kula tukaday masaajidka Isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho, waxaana madaxdii halkaasi kula tukaday Salaadda Ciidda kamid ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyrre, Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiin iyo madax kale oo xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga oo maanta si wayn looga dabaal dagay gobalada dalka Soomaaliya.
“Waxaan ugu hambalyeeynayaa umadda Soomaaliyeed munaasabadaan barakeysan ee Ciidul Fidriga, Alle waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsaneed ee bishii barakeysan ee Ramadaan” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddooomiyaha ayaa Shacabka ka dalbay in la is gar gaaro islamarkaana la caawiyo dadka danyarta ah ee ku dhibaateysan gobalada dalka, maadaama ay dabaal dagayaan malaayiin Shacabka Soomaaliyeed ah qaar kalane aysan maanta awoodin in ay u dabaal dagaan bilasha bisha Shawaal.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka qeyb qaataan caawinta Carruurta Soomaaliyeed ee aan wax heysan” ayuu yiri Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Amaanka masaajidka Isbaheysiga ayaa aad loo adkeeyay waxaana sidoo kale xubnihii halkaasi ku tukaday qaarkood oo hadlay ku baaqeen in Shacabka Soomaaliyeed ay muujiyaan midnimo iyo isu naxariisasho si looga gudbo caqabadaha dalka ku hor gudban.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday in laga Farxiyo carruurta danyarta ah ee aan maanta Ciidin